လိုတဲ့အခြိနျစိတျကွိုကျ – My Blog
ဆရာရယျ…ကမြ ဘယျလောကျ ဒကျစပရိတျ ဖွဈနသေလဲ ဆိုရငျ..ဆရာသာ ကမြကို ဒီဥစ်စာ ကူညီမယျ ဆိုလို့ ရှိရငျ ဆရာ့ကို ကမြ ကိုယျကို ကမြ ထိုးအပျ..ဆရာ လိုရာသုံးစေ ဆိုပွီး ကြေးဇူးဆပျဖို့ အထိတောငျ ပွငျဆငျထားတယျ ဆိုတာ အရှကျကို ဘေးဖယျထားပွီး ပွောပွပါရစရှေငျ….” သူ့လကျတှကေို ဆုပျကိုငျထားရငျး ပွောနတောပါ ။ “ အေးဗြာ……ခငျဗြား ဒီလောကျတောငျ ခကျခဲနတောကို တှရေ့တော့လညျး ကနြျော ဘယျလိုလုပျပွီး ငွငျးလို့ရမလဲလေ…အငျး……ဒီလိုလုပျ…..” “ ဘယျလို လုပျရမလဲဟငျ..ဆရာ…ဆရာ ဖွဈစခေငျြတာကို ပွောလေ….” ငှခြေေးတော့မယျ့ ပုံ ပေါကျလာလို့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျ အငို ရပျသှားပွီး မကျြနှာလေး လနျးလာသညျ ။
“ ဟိုဗြာ..ဒါ ခငျဗြား ပွောလာလို့ ကနြျောလညျး ပွောတာနျော…ဟိုဒငျး..ခငျဗြား ခုနပွောသှားတာ တကယျလား…” “ ဘာလဲဟငျ..ဆရာ..” “ လိုရာသုံးစေ ဆိုပွီး…..ထိုးအပျမယျ ဆိုတာ…..” “ တကယျ..တကယျပွောတာပါ..ဆရာ လိုခငျြတဲ့ အခြိနျ……အဲနီးတိုငျးမျ ပါ..ဆရာ….အဆငျသငျ့ပါဘဲ…..ငှေ အဆငျ ပွတောနဲ့လညျး ပွနျဆပျပါမယျ…ဆရာ….ကူညီပါ ဆရာ..ကယျပေးပါ…..” သူ့ပါးစပျက ထှကျသှားတဲ့ စကားကို သူ့ဖါသာတောငျ မယုံခငျြ ။ “ ခငျဗြားမှာ နရော ရှိလား….” လို့ ပွောမိသှားသညျ ။
“ နရော…..ဟို…တှကွေ့ဖို့လားဟငျ….ဟုတျ..ဟုတျ……ရှိတယျဆရာ…ကမြ အမကေ ဆေးရုံတကျနရေတာလေ..အိမျမှာ ကမြ တယောကျထဲ….ဆရာ…ကမြ အိမျကို လိုကျခဲ့လို့ ရတယျ…..” ကြျောစိနျဘ စိတျရိုငျးတှေ ထိနျးလို့ မရတော့ဘူး ။ “ အိုကေ….လေ…..ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျ..ခငျဗြား ပွောတဲ့အတိုငျး အိုကမေယျ ဆိုရငျ သှားကွတာပေါ့…ငှကေတော့ မနကျဖနျ မနကျ ကမြှ ထုတျပေးလို့ ရမယျ…..” “ ဟုတျ..ဟုတျကဲ့ပါ….ဆရာ….” “ ကဲ..ကဲ..အခြိနျရှိတုံး..ခငျဗြား အိမျကို သှားလိုကျရအောငျ . . ” ငှခြေေးင်ျပွး အတိုး မနနေဲ့ ဒီအကိတျကွီးကို စိတျကွိုကျ ဗွုံးခှငျ့ရမယျ ဆိုတာကို တအား ကွိုကျသှားသညျ ။
ဒီလို အပေးအယူနဲ့ ဗွုံးရတာကို ကြျောစိနျဘတို့က တအား ကွိုကျသညျ ။ သူသညျ ကာမရာဂနဲ့ ပတျသကျရငျ တအား လောဘကွီးတဲ့ လောဘသား တကောငျ ဆိုတာကိုလညျး သူ့ဖါသာ သူ သိသညျ ။ ထှေးထှေးရီလို ငယျငယျ တောငျ့တောငျ့ အပေးကောငျး သဘောကောငျးလေး အိမျပျေါ ရောကျနတောတောငျ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျလို အကိတျကွီးကို စားရမယျ ဖွဈလာတော့ ပွေးပွီး စားပဈလိုကျခငျြပွနျသညျ ။ စားသောကျဆိုငျထဲက အထှကျမှာ အိမျက ထှေးထှေးရီ ဆီကို ဖုနျး လှမျးဆကျလိုကျသညျ ။
“ ထှေးရီရေ..ငါ ဒီည အိမျမပွနျဖွဈဘူး…မနကျဖနျကမြှ တှမေ့ယျ…..” လို့ ..။ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျလညျး ငှလေိုခငျြလှနျးလို့သာ လုပျရတာ ဖွဈမညျ ။ ရှကျသလိုလို ပုံစံနဲ့ စိတျတှေ တအားကို လှုပျရှားနတေဲ့ ပုံ ရှိသညျ ။ တုနျတုနျရီရီ ဖွဈနသေညျ ။ သူ့အိမျကို ရောကျဖို့ ကြျောစိနျဘကို လမျးပွပေးနတေဲ့အခါ သူ့အသံတှသေညျ သိသိသာသာ တုနျခါနသေညျ ။ “ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျ….” “ ဆှလေို့ ချေါပါလား..ကိုကြျောစိနျဘ…..” “ ခငျဗြား..အိမျထောငျ ကခြဲ့ဘူးလား…..” ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျက ခေါငျးခါပွသညျ ။ “ မကဖြူးဘူး..ကိုကြျောစိနျဘ…..” လို့ ပါးစပျက တိုးတိုး ပွနျဖွသေညျ ။
“ ရညျးစားကော ရှိခဲ့ဘူးလား…..” “ ဟုတျ….ရှိခဲ့ဘူးတယျ…..” ကြျောစိနျဘရဲ့ စိတျထဲမှာ ရညျးစားနဲ့တော့ အတှအေ့ကွုံမြားခဲ့မှာပါ..ဒါကွောငျ့လညျး ငါနဲ့ အိပျဖို့ ကို သူ ပါးစပျက ပွောထှကျရဲတာပေါ့..အတှအေ့ကွုံကတော့ ကောငျးကောငျး ရှိပုံပေါကျတယျ…လို့ တှေးနသေညျ ။ “ ကိုကြျောစိနျဘကော..အိမျထောငျ ကခြဲ့ဘူးလားဟငျ….” “ မကဖြူးဘူး..မဆှေ…” ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျတို့ နတေဲ့ နရောကို ရောကျသှားပွီ ။ သူတို့ အိမျလေးက လမျး အဆုံးက မီးရထား သံလမျး နားက အုတျတံတိုငျးနဲ့ ကပျရကျက အစှနျဆုံး အိမျလေး ဖွဈသညျ ။ အိမျလေးဆီကို ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျက အရှကေ့နေ ဦးဆောငျပွီး လြောကျသှားနတေဲ့ အခြိနျ ကြျောစိနျဘသညျ လမျး ဓါတျမီးတိုငျရဲ့ အလငျးရောငျနဲ့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ နောကျပိုငျး ကောကျကွောငျးကို စူးစိုကျကွညျ့ပွီး လိုကျသှားနသေညျ ။
သူ ငယျငယျက သူငယျခငျြးတှေ သုံးနှုံးခဲ့တဲ့ စကားတခုကို ဖတျြကနဲ သတိရလိုကျမိသညျ ။ “ တငျကွုံစီးသညျ ” ဆိုတာ…။ အခုလညျး ကြျောစိနျဘသညျ တငျကွုံစီးပွီး လိုကျနသေညျ ။ အိမျတံခါးကို သော့ဖှငျ့နတော ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ လကျတှေ တုနျနလေို့ တျောတျောနဲ့ သော့ပေါကျထဲ သော့တနျ မရောကျနိုငျတာနဲ့ ကြျောစိနျဘက ကူညီလိုကျရသညျ ။ အငျး…စျောကွီး စိတျတှေ လှုပျရှားနပွေီ ။ သူလညျး ဒီလိုပါဘဲ ။ ဗငျြးရတော့မယျ ဆိုတာက သခြောနပွေီ ဆိုတော့ သူ့ငပဲက တအားကို ထကွှနသေညျ ။ အိမျလေးထဲမှာ မှောငျမဲနသေညျ ။ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျက မီးခလုပျတှကေို တခွောကျခွောကျနဲ့ လိုကျနှိပျဖှငျ့လိုကျလို့ သပျသပျရပျရပျ ပွငျဆငျထားတဲ့ ဧညျ့ခနျးလေးကို တှလေို့ကျရသညျ ။
“ ကိုကြျောစိနျဘ..ထိုငျအုံးနျော..ခဏ…..“ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျသညျ တငျပါးကွီးတှေ တလှုပျလှုပျနဲ့ အတှငျးခနျးထဲကို ဝငျသှားသညျ ။ ကြျောစိနျဘလညျး နှဈယောကျထိုငျ ဆိုဖါလေးမှာ ထိုငျစောငျ့နလေိုကျသညျ ။အိပျဖို့နရောကို သှား ခငျးကငျြး ပွငျဆငျနတော ဖွဈမညျ လို့ စိတျထဲမှာ တှေးလိုကျသညျ ။ နံရံမှာ ခြိတျထားတဲ့ ဓါတျပုံတှပွေက်ခဒိနျတှကေို သူ လိုကျကွညျ့နရေငျး ငှခြေေးတာကလညျး တခွားမှာ ဘယျလိုမှ ခြေးလို့ မရနိုငျဘူးလား…လို့ စဉျးစားနမေိသညျ ။ သူက မိနျးမကွိုကျတဲ့ ဘဲကွီး ဆိုတာ သူ သိနလေို့ ဖွဈမညျ ။ ဘာဘဲ ဖွဈဖွဈ ဒီ တောငျ့တောငျ့တငျးတငျးကွီးကို အမွဲဝါးနရေမယျ ဆိုရငျ တျောတျော ကောငျးသညျ ။
သူသညျ ထှေးထှေးရီကို ဝါးလို့ ရနပေမေယျ့ ဘေးမှာ လိုကျပှဲ အသငျ့ဆောငျထားတာက ပို ကောငျးသညျ ။ တခါတလေ ပစ်စညျးကောငျး စားရဖို့က မလှယျဘူး ။ “ ကိုကြျောစိနျဘ …လာလို့ ရပွီ….” အတှငျးခနျးထဲက ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျ ထှကျလာသညျ ။ အိုး …အိမျနရေငျး ညအိပျဝတျ ဂါဝနျရှညျကွီးကို လဲလှယျ ဝတျဆငျထားနပွေီ ။ သခြောတာက ဒီ ဂါဝနျအောကျမှာ ဘာ အတှငျးခံမှ ခံဝတျမထားဘူး ။ ဟူး…..ဆူဖွိုးတဲ့ ရငျသားစိုငျ ထှားထှားကွီးတှကေ လှုပျတုပျတုပျနဲ့ …။ သူ့အနောကျက လိုကျသှားသညျ ။ အိပျခနျး နှဈခနျး အနကျ ဘယျဖကျက အခနျးထဲကို ချေါသှားသညျ ။ ညအိပျ မီးလုံး ဝါကငျြကငျြလေးဘဲ ထှနျးထားတဲ့ အိပျခနျးထဲမှာ တယောကျအိပျ ကုတငျလေး တလုံး ရှိနသေညျ ။
မှောငျနလေို့မြား ပိုပွီး စိတျလှုပျရှားစရာ ကောငျးနသေလား မသိဘူး ။ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျက သူ့ကို ကုတငျဆီကို ချေါသှားသညျ ။ကြျောစိနျဘရဲ့ ဒုတျက အဆငျသငျ့ မာကွော ထောငျမတျနပွေီ ။ “ ဆှေ…ဆှကေို့ ဘာလုပျစခေငျြလဲဟငျ…..” ကုတငျဘေးနားမှာ နီးနီးကပျကပျ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ရပျမိကွတဲ့ အခြိနျ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျက တုနျရီတဲ့ အသံလေးနဲ့ မေးလိုကျတဲ့အခါ ကြျောစိနျဘလညျး “ ဆှရေဲ့ အဝတျတှကေို အကုနျ ခြှတျလိုကျ..” လို့ ပွောလိုကျသညျ ။ သူ့ကိုယျပျေါက အဝတျတှကေိုလညျး အမွနျ ခြှတျလိုကျသညျ ။ ညဝတျ ဂါဝနျရှညျလေးကို တထပျထဲ ဝတျထားတာမို့ ခြှတျပဈတာက မကွာပါဘူး ။ တခဏ အတှငျးမှာဘဲ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျသညျ ကိုယျလုံးတီး ဖွဈသှားသညျ ။
ကြျောစိနျဘလညျး အဝတျတှကေို အကုနျ ခြှတျပဈလိုကျတာမို့ ကိုယျလုံးတီးကွီး ဒုတျကွီး တရမျးရမျးနဲ့ ဖွဈနပွေီ ။ သူ့ဒုတျကွီးသညျ လုံးပတျ တုတျလှနျးသလို ရှညျလှနျးတာကွောငျ့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျလညျး ဒါကွီးကို ကွောကျလနျ့သလို ပါးစပျလေး အဟောငျးသားနဲ့ ငေးကွညျ့နသေညျ ။ “ ကဲ…ဆှေ ကုတငျပျေါကို တကျ..လုပျကွရအောငျ…..” ပေါငျလုံး ဖွူတုတျတုတျ ဖငျကွီးကွီးနဲ့ ရဆေေးငါးကွီးကို ကွညျ့ပွီး ကြျောစိနျဘ စိတျတှေ ထိနျးလို့ မရတော့ ။ ဒုတျကလညျး ဘာနာသလဲ မမေးနဲ့ ။ ခကျြကို ကပျနပွေီ ။ သူ့လကျနှဈဖကျက တငျးလုံးနတေဲ့ ရငျစိုငျကွီး နှဈမှာပျေါကို ရောကျသှားကွသညျ ။ပှတျသကျသလို ဆုပျနယျနသေညျ ။ ရငျသီးလေးတှကေ စူထှကျနကွေသလို မာတငျးနသေညျ ။
ပွငျးထနျလှနျးတဲ့ ကာမစိတျတှကွေောငျ့ လိငျတနျရဲ့ ထိပျပေါကျလေးထဲက အရညျကွညျလေးတှေ ယိုစီး ကနြကွေပွီ ။ “ ဆှေ….ကိုယျံဟာကို စုတျပေးမလား…..” ကြျောစိနျဘက သူ့ဒုတျကွီးကို ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ လကျထဲကို ထညျ့ပေးလိုကျသညျ ။ “ ဟို..ဟိုလေ……ဆှေ…ဆှေ….ဆှေ…မစုတျဖူးဘူး…..” “ ဆှေ မစုတျတတျရငျ ကိုယျ သငျပေးမှာပေါ့…..” ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ ပါးစပျထဲမှာ ကြျောစိနျဘရဲ့ လီးကွီး အဆနျ့မပွဲ ရောကျနပွေီ ။ိ“ စုတျ..စုတျ….မဆှေ..လြာနဲ့ ဝိုကျပွီး ကလိပေး….” ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျလညျး သူခိုငျးတဲ့အတိုငျး သူ့လီးကို လြာနဲ့ ဝိုကျကစားပွီး စုတျပေးနတေဲ့အခြိနျ တငျးလုံးပွီး ခပျတှဲတှဲကနြတေဲ့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ နို့ကွီးတှကေို သူကိုငျနယျ ကစားနသေညျ ။
စူထှကျနတေဲ့ နို့သီးခေါငျးညိုညိုလေးတှကေို လကျညှိုးနဲ့ လကျမ သုံးပွီး ခပြေေးနသေညျ ။ ဒီစျောကွီးသညျ သူ့ကို အထာပေးနတောတော့ ကွာပွီ ။ ဒီလောကျ မွနျမွနျနဲ့ ဒီအခွအေနကေို ရောကျသှားလိမျ့မယျလို့ ကြျောစိနျဘ မထငျခဲ့ဘူး ။ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ ပါးစပျထဲကို သူ ကော့ကော့ထိုးသှငျးနရေငျး နို့ကွီးနှဈလုံးကို အားရပါးရ ဆုပျနယျနသေညျ ။ “ ဟူး…ကောငျးလိုကျတာ..စုတျ..စုတျ..ဒါ ပွီးရငျ ခငျဗြား စောကျပတျကို ကြုပျ ယကျပေးမယျ…..” ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျသညျ လိငျဆကျဆံဘူးတဲ့ အတှအေ့ကွုံ ရှိခဲ့ပမေယျ့ လိငျတနျကို စုတျတဲ့ အတှအေ့ကွုံ မရှိ ခဲ့ဘူး ဆိုတာ ကြျောစိနျဘ သိလိုကျသညျ ။ သူက ဘယျလို စုတျရမညျ ဆိုတာကို သငျပွတာတောငျ သူမသညျ ကြှမျးကငျြမှု မရှိ ။
ဒါကွောငျ့ သူမကို စုတျနတောကို ရပျခိုငျးလိုကျသညျ ။ ပွီးတော့ သူမကို ဖငျပူးတောငျး ထောငျ ကုနျးခိုငျးလိုကျသညျ ။ ဖငျတုံးကွီးသူ ဖွဈတာကွောငျ့ ဖငျပူးတောငျး ထောငျလိုကျတဲ့အခါ ဖငျကားကားကွီးတှကေ ပိုကွီးသလို ထငျမှတျရပွီး ဖငျကွီးတှေ ကွားက စောကျဖုတျကွီးက ပွူးထှကျနသေညျ ။ ကြျောစိနျဘလညျး ပကျလကျ ပေါငျကားခိုငျးပွီး ယကျရတာထကျ အခုလို ဖငျပူးတောငျး ထောငျထားတဲ့အခြိနျ ပွူး ထှကျနတေဲ့ စောကျဖုတျကို ယကျရတာက ပိုကောငျးသညျ လို့ ထငျပွီး အခုလို ဖငျပူးတောငျးထောငျတဲ့ ပုံစံကို လုပျခိုငျးလိုကျတာပါ ။ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျလညျး သူလုပျခိုငျးတဲ့ ပုံစံကို ခကျြခငျြး လုပျပေးလို့ ကြျောစိနျဘသညျ ဒီမိနျးမ မဆိုးဘူး လို့ မှတျခကျြခသြညျ ။
ပွူးထှကျနတေဲ့ စောကျဖုတျကွီကို မယကျခငျ အရငျ နမျးရှုံ့လိုကျသညျ ။ “ ဟငျ့…ဘာလုပျတာလဲကှယျ…..မနံဘူးလား….အားနာလိုကျတာ…..” “ ဟငျး..အဲဒီအနံ့ကို ကြုပျ ကွိုကျတာ….ဒီအနံ့က ကြုပျရဲ့ လိငျစိတျထကွှတာကို အမွငျ့ဆုံးကို ရောကျသှားစတေယျ…” ပွောပွောဆိုဆို ကြျောစိနျဘက ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ ခုံးဖေါငျးနတေဲ့ စောကျဖုတျကွီးကို လြာနဲ့ ယကျလိုကျသညျ။ အောကျကနေ အပျေါကို ပငျ့ကျော ယကျလိုကျတာပါ ။ “ အိုး…….ဟငျ့…..အမလေး………” ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျလညျး ဖငျတုံးကွီးတှေ ရမျးခါသှားရအောငျ တုနျလှုပျသှားသညျ ။
ကြျောစိနျဘလညျး ဖငျပူးတောငျးထောငျပေးထားတဲ့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ အနောကျဖကျမှာ လေးဖကျထောကျရကျ နဲ့ သူမ စောကျဖုတျအကှဲကွီးကို လြာနဲ့ ယကျနတောမို့ ခှေးတှေ တကောငျနဲ့ တကောငျ ဖငျကို လြာနဲ့ ယကျနေ သလို ပုံစံ ဖွဈနသေညျ လို့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျက ထငျမိလိုကျသညျ ။ ကြျောစိနျဘလညျး လြာနဲ့ ဆကျတိုကျ ဖိဖိယကျပေးလိုကျရငျး စိတျတအား ကွှလာတော့ စောကျဖုတျကို ပွှတျကနဲ စုတျယူလိုကျသညျ ။ “ ဟား…..” “ အိုး……” ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျလညျး သူမ ဘဝမှာ ပထမဆုံး စောကျဖုတျ အယကျခံဘူးတာမို့ အတှအေ့ကွုံသဈကို ထူး ဆနျး သဘောကနြသေညျ ။
ငှအေမြားကွီးကို အပူတပွငျးလိုလို့ အကူအညီပေးတဲ့ ကြျောစိနျဘကို သူ့လိုဘတှေ ဖွညျ့ဆညျးပေးခဲ့ရပမေယျ့ တကယျတမျး သူမကိုယျတိုငျလညျး ယောကျြားရဲ့ အထိအတှတှေ့ကေို ငတျမှတျ ငံ့လငျ့နခေဲ့တာ မဟုတျလား ။ ရငေတျတုံး ရတှေငျးထဲကလြိုကျသလို လိုခငျြတာတှကေို ကြျောစိနျဘက ပေးစှမျးနပွေီ ။ သူ့လြာကွီးက အပွားလိုကျကွီး အကှဲကွောငျးတလြောကျ အပျေါက အောကျ အောကျက အပျေါ တပွတျပွတျနဲ့ ယကျပေးနသေလို လြာထိပျခြှနျနဲ့လညျး စောကျဖုတျ အတှငျးထဲကို ထိုးပေးလာသညျ ။ “ အိုး…အား…..အား……အား……….” ဖငျကွီးတှေ တကွှကွှနဲ့ တအား အရသာထူးကဲနတေဲ့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျကို ဒီလောကျ နှူးနှပျပေးရငျ တျောပွီ လို့ ကြျောစိနျဘ ယူဆသညျ ။
သူမသညျ ဖငျတကွှကွှနဲ့ စောကျဖုတျ တအား ယားကွှနပွေီ ။ “ ကြုပျ ယကျတာတှေ ကွိုကျလား…မဆှေ…..” “ ကွိုကျ….ကွိုကျတယျ..ကိုကြျောစိနျဘ……” “ အငျး..ကွိုကျရမယျလေ..ကြုပျက စတေနာ ပါတယျဗြ……ခငျဗြားကို ကောငျးစခေငျြတယျ..သိလား…” “ အငျး..ဟုတျကဲ့ပါ…..” “ ကဲ..ကြုပျတို့ လိုးကွရအောငျဗြာ……” ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျကို ကုတငျပျေါမှာ ကိုယျတဝကျ ပကျလကျ အိပျခိုငျးလိုကျပွီး ကြျောစိနျဘက ကုတငျဘေးမှာ မတျတပျရပျရငျး သူမ ပေါငျတနျတှကေို ဖွဲကားစသေညျ ။ ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို ပူးကာ မွှောကျကိုငျလိုကျတော့ ပေါငျကွားက အင်ျဂါစပျကွီးက ဖေါငျးပွူး အဈထှကျနသေညျ ။
ကြျောစိနျဘလညျး ဒီမွငျကှငျးကို စှဲမကျစှာနဲ့ ပွုံးပွုံးကွီး စိုကျကွညျ့နလေို့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျလညျး “ အို..လုပျမှာဖွငျ့ လုပျလေ..ဘာလို့ သသေခြောခြာ စိုကျကွညျ့နတောလဲကှာ….” လို့ လသေံလေးနဲ့ ပွောလိုကျရငျး သူမ မကျြလုံးတှကေို ပိတျထားလိုကျသညျ ။ “ ခငျဗြားရဲ့ အဖုတျကွီးက ကွညျ့ကောငျးလှနျးလို့ပါဗြာ…” လို့ ကြျောစိနျဘက ပွောလိုကျသညျ ။ “ ဒီလိုဘဲ ကွညျ့နတေော့မှာလား “ လို့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျက ပွောပွနျတော့ ကြျောစိနျဘလညျး “ လိုးပါပွီဗြာ..လိုးပါပွီ….” လို့ ပွုံးဖွီးဖွီးနဲ့ ပွောလိုကျရငျး သူ့လိငျတနျကွီးကို လကျတဖကျနဲ့ ဆုပျကိုငျပွီး ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ အကှဲကွောငျးကွီးကို အောကျက အထကျ အထကျက အောကျ လိုငျးဆှဲ ပှတျတိုကျလိုကျသညျ ။
လိငျတနျထိပျ ဒဈလုံးကွီးက ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ အစိလေးကို ထိပှတျသှားတာမို့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျလညျး ဆတျကနဲ တုနျသှားရသညျ ။ သူ့လကျတဖကျက ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ နို့ကွီးတလုံးကို လှမျး ကိုငျလိုကျသညျ ။ မာတငျး စူထှကျနတေဲ့ နို့သီးခေါငျးလေးကို လကျခြောငျးတှနေဲ့ ဆှဲလိုကျတဲ့အခြိနျ လိငျတနျကို အင်ျဂါစပျအပေါကျထဲကို ဖိသှငျးလိုကျသညျ ။ လုံးပတျတုတျလှတဲ့ သူ့လိငျခြောငျးကွီး အတငျးကွီး တိုးဝငျလာတာက ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျ့ကို အထူး အရသာ တှသှေ့ားစသေညျ ။
အင်ျဂါစပျ အတှငျးသားတှကေို ပှတျတိုကျသှားတာ ဆိုတော့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျ တအားကို တုနျခါသှားရသညျ ။ “ အို…….အမလေး….ကွီးလိုကျတဲ့ ဟာကွီး . .” ကြျောစိနျဘက သူ့ပစ်စညျးကို ကွီးတယျ ပွောလို့ သဘောကသြှားသညျ ။ တငျးကွပျနတေဲ့ အင်ျဂါစပျပေါကျထဲကို ဆကျပွီး ဖိသှငျးလိုကျတော့ လိငျတနျတုတျကွီးဟာ တထဈထဈနဲ့ ဗဈြကနဲ ထပျ ဝငျသှားသညျ ။ ကြျောစိနျဘအတှကျလညျး တအားကွပျလှနျးနသေညျ ။ နောကျကို ပွနျဆုတျပွီး ဖိသှငျးတာတှကေို သုံးလေးကွိမျလောကျ လုပျပေးလိုကျတော့ သူ့တနျဆာခြောငျးသညျ အင်ျဂါစပျခေါငျး ထဲမှာ လှုပျရှားလို့ ရလာသညျ ။
ဖိဖိသှငျးတော့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ အျောညညျးသံတှလေညျး ဆကျတိုကျ ထှကျလာသညျ ။ ကြျောစိနျဘအတှကျ အရာ ရှိသလို ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျ အတှကျလညျး ထူး ကဲတဲ့ ကာမ အရသာထူးကို ရနသေညျ ။ လိငျ ဆကျဆံခွငျးဟာ တဖကျထဲ အတှကျ မဟုတျဘဲ သူကောငျးကိုယျကောငျး ယောကျြားရော မိနျးမ ပါ ကောငျးကွတဲ့ ကိစ်စ တခု ပါလား ။ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ ခွထေောကျတှကေို သူ့ပုခုံး တဖကျတခကျြပျေါမှာ တငျပွီး အားနဲ့ ဖိဖိ ဆောငျ့ထညျ့တဲ့အခါ တဖပျဖပျ အသံတှနေဲ့ အရညျလိုကျလာလို့ တခါတခါ ဖှတျဖှတျဖှတျ ဆိုတဲ့ အသံတှကေိုပါ ကွားကွရသညျ ။
“ ကောငျးလား..မဆှေ…….ကြုပျ လိုးပေးတာ ကောငျးလား….” ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျလညျး ကာမအရှိနျတှေ တအား တကျနပွေီ ။ တစှပျစှပျ လိုးထညျ့ပေးနတေဲ့ ကြျောစိနျဘရဲ့ လိုးခကျြတှကေိုရော လုံးပတျတုတျတုတျ လီးကွီးကိုရော တအားကွိုကျနသေညျမို့ “ ကောငျး တယျ..တအား ကောငျးတယျ…..” လို့ ဖွလေိုကျသညျ ။ ကြျောစိနျဘကလညျး “ လိုးပွီဗြာ..ကြုပျလညျး တအားကို ကောငျးတယျ..ခငျဗြား အဖုတျက ရလေညျ လိုးလို့ အရသာ ရှိတယျ…..” လို့ ပွောရငျး ဆကျတိုကျဘဲ ဆောငျ့ထညျ့ လိုးလတေော့သညျ ။ “ အီး…တအား..တအားဆောငျ့..ဆောငျ့…ဆောငျ့…အူး….အူး…….တအားကောငျးနပွေီ…အို…ဆောငျ့ပါ…ဆောငျ့ပါ……” ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျတယောကျ အထှဋျအထိပျကို ရောကျတော့မှာမို့ သှေးရူးသှေးတနျးတှေ ဖွဈနပွေီ ဆိုတာကို ကြျောစိနျဘ သိတာကွောငျ့ တအား ဆကျတိုကျ ဆောငျ့ထညျ့သညျ ။
ထမျးထားတဲ့ သူမ ပေါငျတှကေို ပွနျခလြိုကျပွီး အားနဲ့ ဖိဖိဆောငျ့တာ ။ ဖပျဖပျ ဖပျဖပျ အသံတှေ နဲ့ ကယျြလောငျတဲ့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျရဲ့ အျောညညျးသံတှဟော ကြျောစိနျဘရဲ့ အသကျရှူသွံပျငးပွငျးတှနေဲ့ အတူ ထှကျပျေါနသေညျ ။ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျသညျ အင်ျဂါစပျ ကွှကျသားတှကေို တအားညှဈလိုကျတာကွောငျ့ ကြျောစိနျဘရဲ့ လိငျတနျကို တအားဆုပျညှဈတဲ့ ကွပျတညျးတဲ့ ခံစားမှုနဲ့အတူ ကြျောစိနျဘ တအားကောငျးလှနျးလာလို့ ပွီးခါနီးဆဲဆဲ ဖွဈလာတဲ့ အခြိနျမှာ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျ အရငျ ပွီးသှားသညျ ။
“ အမလေး..အမလေး…ကောငျးလိုကျတာ…အို…အို…..ကောငျးလိုကျတာ…….အား…….အား…..” လို့ အျောရငျး ပွီးသှားသညျ ..။ ကြျောစိနျဘလညျး ဆကျတိုကျ ဆကျဆောငျ့လိုကျသညျ ။ သူလညျး တအားကောငျးတကျသှားပွီး သုတျတှေ တအားပနျးထှကျသှားပွီး ပွီးသှားသညျ ။ “ အား……အား…..အား……..ဟငျး…ဟငျး………..ဟငျး………..အိုး………” “ ကိုကြျောစိနျဘ…..ရှငျ့ဟာကို မထုတျနဲ့အုံး……” အရေးထဲ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျက သူ့ကို တဆုံး ဆကျသှငျးစိမျထားဖို့ ပွောနပွေနျသညျ ။ အိမျကို ပွနျရောကျပွီ ။ ကြျောစိနျဘ ရခြေိုးနသေညျ ။ အလုပျက ခှငျ့ယူထားသညျ ။
ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျနဲ့ အပွတျကဲလိုကျလို့ သူ့တကိုယျလုံး နုံးခြိနသေညျ ။ ကာမ ဆန်ဒ ပွငျးထနျလိုလားနတေဲ့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျလညျး တခကျြခုတျနှဈခကျြပွတျ ဖွဈသှားလို့ ကနြေပျနသေညျ ။ ငှလေိုတာလညျး ငှရေ..ကာမဆန်ဒလိုတာလညျး ကာမဆန်ဒ ပွညျ့ရလို့ပါ ။ အိမျပွနျရောကျတော့ ထှေးထှေးရီက နှေးထှေးတဲ့ အပွုံးလေးနဲ့ ကွိုနသေညျ ။ သူ့ကို ပွာပွာသလဲ ဂရုစိုကျသညျ။ သူ ဘယျသှားသညျ ဘာလုပျသညျ ဆိုတာတှကေို မမေး ။ စပျလညျး မစပျစု ။ ဟငျးကောငျးတှေ ခကျြထားသညျ.. အကိုကွီး စားခငျြတဲ့အခြိနျ ပွောပါတဲ့ ။ ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျပွီး ရပေူပူတှေ တဝေါဝေါ ကနြတေဲ့ ရပေနျးအောကျမှာ မကျြစိပိတျ မတျတပျရပျပွီး ရခြေိုးလိုကျ သညျ ။
“ အကိုကွီး…..” ဟငျ…ထှေးထှေးရီ သူ့ဆီ ရောကျလာတာ ။ ရခြေိုးခနျးထဲကို ဝငျလာသညျ ။ ထှေးထှေးရီသညျ ကိုယျပျေါမှာ အ ဝတျဆိုလို့ ခညျြတမြှငျတောငျ ကပျမနေ ။ ကိုယျလုံးတီးကွီးနဲ့ ဝငျလာတာ ။ “ အကိုကွီးကို ခြေးတှနျးပေးဖို့ လာတာပါ..” လို့ ထှေးထှေးရီက ပွောလိုကျရငျး သူ့ကြောပွငျကို ထှားလုံးတငျးနေ တဲ့ ရငျသားစိုငျကွီးနှဈလုံးနဲ့ ဖိကာ ပှတျပေးတော့သညျ ။ ကြောပွငျကို ဆပျပွာရညျတှနေဲ့ ရငျသားကွီးနှဈလုံးက ခြောမှတျ ပှတျတိုကျနသေညျ ။ထှေးထှေးရီရဲ့ လကျတဖကျကလညျး သူ့ရငျဘတျကို လာပှတျနသေညျ ။ “ ခံလို့ ကောငျးလားဟငျ..အကိုကွီး…..”
“ အငျး….ကောငျးတယျ…” ထှေးထှေးရီက သူ့လကျတဖကျကို ဆှဲယူကာ သူမပေါငျကွားထဲကို ပို့ပေးလိုကျသညျ ။ သူမ ကိုငျစခေငျြတဲ့နရောကို ပို့ပေးလိုကျတာ ။ သူ့လကျသညျ ထှေးထှေးရီရဲ့ မို့ဖေါငျးတဲ့ ဆီးခုံဖေါငျးဖေါငျးကွီးပျေါကို ရောကျနသေညျ ။ အမှေးပါးပါးနဲ့ ဖေါငျးအိနတေဲ့ ထှေးထှေးရီရဲ့ အင်ျဂါစပျကွီးကို ကိုငျမိရတော့ သူ့စိတျရိုငျးတှကေ ထိနျးကနဲ ထကွှလာရတော့တာဘဲ ။ ဘယျလောကျဘဲ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျနဲ့ တညလုံး ဆှဲထားထား..ထှေးထှေးရီရဲ့ နို့ကွီးတှနေဲ့ကြောကို ပှတျနကေထဲက သူ့လိငျတနျသညျ တမဟုတျခငျြး ကွီးလာထှားလာ ရှညျထှကျလာခဲ့ပွီး အခုလို သူက ထှေးထှေးရီရဲ့ မိနျးမကိုယျကို ကိုငျလိုကျတော့ တအားကို ထကွှ ထောငျမတျလာသညျ ။
“ ဟိ..အကိုကွီး ထလာပွီ …….ဒုံးပြံကွီး ပဈဖို့ ရယျဒီ ဖွဈတော့မယျ…..ခိခိ…..” ထှေးထှေးရီက သူ့လိငျတနျကို ထိပျပိုငျးကနေ ကိုငျဆုပျလိုကျသညျ ။ ဆပျပွာရညျတှနေဲ့ ရှနေဲ့နောကျ ပှတျတိုကျပေးသညျ ။ “ အူး……အား…အား…….ထှေးထှေးရီ…နငျ..တတျလညျး တတျနိုငျတယျဟာ….ငါ့ မထထအောငျ လာဆှနတေယျ . . .” ထှေးထှေးရီက ပွုံးစိစိနဲ့ မတျမတျထောငျနပွေီ ဖွဈတဲ့ ကြျောစိနျဘရဲ့ လိငျတနျခြောငျးကွီးကို ကှငျးတိုကျ ကစားပေးနရောက ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျ ခလြိုကျပွီး ထိပျဖူးကားကွီးကို ငုံကာ စုတျလိုကျလသေညျ ။
“ ဟေး…အိုး……..နငျ…နငျ….လုပျလညျး လုပျတတျတယျ…” ထှေးထှေးရီသညျ လိငျတနျကွီးကို အားရပါးရ စုတျနပွေီ ။ ထှေးထှေးရီရဲ့ အစုတျသညျ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျထကျ ပို သာတာက အမှနျဘဲ ။ သူ့လိငျတနျကွီး အစှမျးကုနျ တငျးမာပွီး ထှေးထှေးရီရဲ့ အစုတျအယကျ ကလိခကျြတှကွေောငျ့ တအားထနျတငျးနပွေီ ။ ထှေးထှေးရီကို နံရံမှာ လကျနှဈဖကျ ထောကျပွီး ဖငျကုနျးခိုငျးလိုကျသညျ ။ ခွထေောကျတှကေို ကားခိုငျးလိုကျသညျ ။ ဖငျတုံးတှေ ကွားက ပျေါလာတဲ့ စောကျဖုတျအမွောငျးထဲကို လိငျတနျတပွေီ့း ဖိသှငျးလိုကျသညျ ။ “ အား……” ထှေးထှေးရီရဲ့ အျောသံလေး ထှကျလာသညျ ။ နို့ကွီးနှဈလုံးကို လှမျးဆှဲပွီး ဖိဖိထိုးညှောငျ့ပဈလိုကျသညျ ။
“ အား…..အား….အား…..” “ ဖပျ..ဖပျ…ဖပျ..ဖပျ……..” ထှေးထှေးရီက ကုတငျပျေါ ရှကွေ့ရအောငျ အကိုကွီး…လို့ ပွောသညျ ။ ကုတငျပျေါ ရောကျတော့ “ ကမြ အပျေါက တကျပါရစေ ” လို့ ပွောတာကွောငျ့ ပကျလကျအိပျပေးလိုကျတဲ့အခါ ထှေးထှေးရီလညျး ပေါ့ပါးစှာနဲ့သူ့ကိုယျပျေါကို ခှတကျလာသညျ ။ မာကြောတငျးထောငျနတေဲ့ သူ့လိငျတနျအပျေါကို ခှထိုငျလိုကျပွီး လကျကလေးနဲ့ လိငျတနျခေါငျးကို ကိုငျပွီး သူမ စောကျဖုတျမှာ တလေို့ကျတဲ့ ထှေးထှေးရီသညျ ကာမစိတျတှေ တျောတျော ပွငျးထနျနပေုံရသညျ ။ နှာတနျအဖြားနဲ့ ပါးပွငျ နားရှကျတှေ နီရဲနသေညျ ။
လိငျတနျပျေါကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ဖိထိုငျခလြိုကျတဲ့အခြိနျ တဟငျးဟငျးနဲ့ ညညျးလိုကျတဲ့အသံတှေ ထှကျလာသညျ ။ “ အိုး..ကြှတျ..ကြှတျ…..” ထှေးထှေးရီသညျ သူမ စိတျကွိုကျ ဖိဖိညှောငျ့တော့တာဘဲ ။ ကြျောစိနျဘလညျး အောကျကနေ ပငျ့ကော့ ထိုးပေးသညျ ။ ဆောငျ့အခနြဲ့ ပငျ့အထိုး စညျးခကျြညီနသေညျ ။ တစှပျစှပျ တဖပျဖပျ အသံတှေ ထှကျနသေညျ ။“ အား……အား…ကောငျးလိုကျတာ…အကိုကွီးရယျ…..” သူ အားမရတာကွောငျ့ ထှေးထှေးရီကို ပကျလကျပေါငျဖွဲခိုငျးလိုကျပွီး အားနဲ့မာနျနဲ့ တကျ ဆောငျ့တော့မှ တအား ကောငျးသှားပွီး သူရော ထှေးထှေးရီကော ပွိုငျတူလို ပွီးသှားကွရသညျ ။ ပကျလကျလှနျပွီး အမောဖွနေခေိုကျ ထှေးထှေးရီဆီက ထူးဆနျးတဲ့ စကားတှကေို သူ ကွားလိုကျရသညျ ။
“ အကိုကွီး…..အကိုကွီးနဲ့ ကှဲသှားခဲ့တဲ့ ခငျနှငျးဆီကို အကိုကွီး လိုကျရှာသေးလားဟငျ…..” တဲ့…။ ကြျောစိနျဘလညျး ထှေးထှေးရီ ကို ဆတျကနဲ လှညျ့ကွညျ့လိုကျသညျ ။ “ ရှာတာပေါ့….ဘယျကို ရောကျသှားသလဲ မသိတော့ဘူး…..” “ အကိုကွီးရဲ့ ရငျသှေးလေး တနရောရာမှာ ရှိနမှောဘဲနျော…” “ အငျး…..” “ အကိုကွီး…ပွနျတှခေ့ငျြလားဟငျ……” “ ထှေးထှေးရီ..နငျ..ဘာတှေ လာမေးနတောလဲ…..ငါ့စိတျတှကေို ကွကှေဲထိခိုကျအောငျ လာလုပျမနနေဲ့…..ငါ တှခေ့ငျြတာပေါ့..ခငျနှငျးဆီကို ငါ တကယျ ခဈြခဲ့ကွိုကျခဲ့တာ….” “ အျော..အကိုကွီးရယျ…ဖွဈမှ ဖွဈရလေ…ဒါနဲ့မြား ..သူ့ကို ထားပွီး နိုငျငံခွားကို ထှကျသှားရတယျလို့…”
“ အေး..အဲ့တုံးက ငါက ကလေးမယူခငျြဘူးဟ…ငါက တကယျဆို ပြျောလို့ အားမရသေးတာ..ငါ မှားပါတယျ… ငါ့ရဲ့ မိုကျမဲခကျြတှပေေါ့ဟာ…” ထှေးထှေးရီလညျး မထငျတာတှေ ကွားရလို့ အံ့သွနသေညျ ။“ ဒါဆို ခငျနှငျးဆီကို ပွနျတှရေ့ငျ အကိုကွီး လကျခံမှာလား….” “ အငျး..လကျခံမှာပေါ့…” “ ဟငျ..ဒါဆို..ထှေးထှေးရီကို ဘယျလို လုပျမလဲဟငျ….အကိုကွီးက ထှေးရီကို ကနျထုတျလိုကျတော့မှာလား..” ထှေးထှေးရီက ပွုံးစိစိနဲ့ မေးလိုကျတာပါ ။ ကြျောစိနျဘက ထှေးထှေးရီရဲ့ ဖငျကားကားကွီးကို သူ့လကျဖဝါးကွီးနဲ့ ဖနျြးကနဲ ရိုကျထညျ့လိုကျရငျး ။
“ နငျ့ကို ငါ ဘယျကနျထုတျမလဲ..နငျ့ကို ငါ အရံထားမှာပေါ့….ခငျနှငျးဆီကို လိုးလိုကျ..နငျ့ကို လိုးလိုကျ..တခါတလေ နှဈယောကျစလုံးကို တခြိနျထဲမှာ လိုးလိုကျနဲ့…ဟားဟားဟား……” လို့ ပွောရငျး ရယျမောလိုကျတဲ့အခါ ထှေးထှေးရီလညျး..“ ဟာ…အကိုကွီး..တအားဆိုးတာဘဲကှာ….” လို့ ပွောရငျး ကြျောစိနျဘရဲ့ ခြှေးတှေ စိုနတေဲ့ ကြောပွငျကွီးကို လှမျး ရိုကျလိုကျသညျ ။ “ ဟားဟားဟား….” ဒီနေ့ ရုံးကို ရောကျတော့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျ တယောကျ ဘယျလိုနသေလဲ ဆိုတာ ကြျောစိနျဘ သိခငျြသညျ ။ မနကေ့ ဘဏျကနေ သူမ လိုတဲ့ ငှတှေကေို ကိုယျတိုငျ လိုကျထုတျပေးလိုကျသညျ ။
ငှကေ တျောတျော မြားပမေယျ့ ဒျေါဆှဆှေလှေိုငျကွီးကို အပေါကျစုံအောငျ လိုးခှငျ့ရတာကိုလညျး ကြျောစိနျဘ အငျမတနျ ကနြေပျနသေညျ ။ ဆကျဆကျ ပွနျဆပျပါမယျ လို့ အတနျတနျ အထပျထပျ ဂတိပေးနတေဲ့ သူမကိုလညျး ယုံမိသညျ ။ အတိုး တပွားမှ သူ မယူလိုဘူး ။ သူမက သူလိုတဲ့အခြိနျ သူ့လီးကို အားရပါးရ စုတျပေးတာတှနေဲ့ ဖငျပူးတောငျး ထောငျပေးပွီး စိတျကွိုကျ လုပျခငျြသလို လုပျပါတော့ လို့ စောကျဖုတျကွီးနဲ့ စအိုပေါကျကို သူ့ကို ထိုအပျတာတှနေဲ့တငျ သူ ကနြေပျနပေါပွီ…… ပွီးပါပွီ။
ဆရာရယ်…ကျမ ဘယ်လောက် ဒက်စပရိတ် ဖြစ်နေသလဲ ဆိုရင်..ဆရာသာ ကျမကို ဒီဥစ္စာ ကူညီမယ် ဆိုလို့ ရှိရင် ဆရာ့ကို ကျမ ကိုယ်ကို ကျမ ထိုးအပ်..ဆရာ လိုရာသုံးစေ ဆိုပြီး ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ အထိတောင် ပြင်ဆင်ထားတယ် ဆိုတာ အရှက်ကို ဘေးဖယ်ထားပြီး ပြောပြပါရစေရှင်….” သူ့လက်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ပြောနေတာပါ ။ “ အေးဗျာ……ခင်ဗျား ဒီလောက်တောင် ခက်ခဲနေတာကို တွေ့ရတော့လည်း ကျနော် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ငြင်းလို့ရမလဲလေ…အင်း……ဒီလိုလုပ်…..” “ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဟင်..ဆရာ…ဆရာ ဖြစ်စေချင်တာကို ပြောလေ….” ငွေချေးတော့မယ့် ပုံ ပေါက်လာလို့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် အငို ရပ်သွားပြီး မျက်နှာလေး လန်းလာသည် ။
“ ဟိုဗျာ..ဒါ ခင်ဗျား ပြောလာလို့ ကျနော်လည်း ပြောတာနော်…ဟိုဒင်း..ခင်ဗျား ခုနပြောသွားတာ တကယ်လား…” “ ဘာလဲဟင်..ဆရာ..” “ လိုရာသုံးစေ ဆိုပြီး…..ထိုးအပ်မယ် ဆိုတာ…..” “ တကယ်..တကယ်ပြောတာပါ..ဆရာ လိုချင်တဲ့ အချိန်……အဲနီးတိုင်းမ် ပါ..ဆရာ….အဆင်သင့်ပါဘဲ…..ငွေ အဆင် ပြေတာနဲ့လည်း ပြန်ဆပ်ပါမယ်…ဆရာ….ကူညီပါ ဆရာ..ကယ်ပေးပါ…..” သူ့ပါးစပ်က ထွက်သွားတဲ့ စကားကို သူ့ဖါသာတောင် မယုံချင် ။ “ ခင်ဗျားမှာ နေရာ ရှိလား….” လို့ ပြောမိသွားသည် ။
“ နေရာ…..ဟို…တွေ့ကြဖို့လားဟင်….ဟုတ်..ဟုတ်……ရှိတယ်ဆရာ…ကျမ အမေက ဆေးရုံတက်နေရတာလေ..အိမ်မှာ ကျမ တယောက်ထဲ….ဆရာ…ကျမ အိမ်ကို လိုက်ခဲ့လို့ ရတယ်…..” ကျော်စိန်ဘ စိတ်ရိုင်းတွေ ထိန်းလို့ မရတော့ဘူး ။ “ အိုကေ….လေ…..ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်..ခင်ဗျား ပြောတဲ့အတိုင်း အိုကေမယ် ဆိုရင် သွားကြတာပေါ့…ငွေကတော့ မနက်ဖန် မနက် ကျမှ ထုတ်ပေးလို့ ရမယ်…..” “ ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ပါ….ဆရာ….” “ ကဲ..ကဲ..အချိန်ရှိတုံး..ခင်ဗျား အိမ်ကို သွားလိုက်ရအောင် . . ” ငွေချေးင်္ပြး အတိုး မနေနဲ့ ဒီအကိတ်ကြီးကို စိတ်ကြိုက် ဗြုံးခွင့်ရမယ် ဆိုတာကို တအား ကြိုက်သွားသည် ။
ဒီလို အပေးအယူနဲ့ ဗြုံးရတာကို ကျော်စိန်ဘတို့က တအား ကြိုက်သည် ။ သူသည် ကာမရာဂနဲ့ ပတ်သက်ရင် တအား လောဘကြီးတဲ့ လောဘသား တကောင် ဆိုတာကိုလည်း သူ့ဖါသာ သူ သိသည် ။ ထွေးထွေးရီလို ငယ်ငယ် တောင့်တောင့် အပေးကောင်း သဘောကောင်းလေး အိမ်ပေါ် ရောက်နေတာတောင် ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လို အကိတ်ကြီးကို စားရမယ် ဖြစ်လာတော့ ပြေးပြီး စားပစ်လိုက်ချင်ပြန်သည် ။ စားသောက်ဆိုင်ထဲက အထွက်မှာ အိမ်က ထွေးထွေးရီ ဆီကို ဖုန်း လှမ်းဆက်လိုက်သည် ။
“ ထွေးရီရေ..ငါ ဒီည အိမ်မပြန်ဖြစ်ဘူး…မနက်ဖန်ကျမှ တွေ့မယ်…..” လို့ ..။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း ငွေလိုချင်လွန်းလို့သာ လုပ်ရတာ ဖြစ်မည် ။ ရှက်သလိုလို ပုံစံနဲ့ စိတ်တွေ တအားကို လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံ ရှိသည် ။ တုန်တုန်ရီရီ ဖြစ်နေသည် ။ သူ့အိမ်ကို ရောက်ဖို့ ကျော်စိန်ဘကို လမ်းပြပေးနေတဲ့အခါ သူ့အသံတွေသည် သိသိသာသာ တုန်ခါနေသည် ။ “ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်….” “ ဆွေလို့ ခေါ်ပါလား..ကိုကျော်စိန်ဘ…..” “ ခင်ဗျား..အိမ်ထောင် ကျခဲ့ဘူးလား…..” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က ခေါင်းခါပြသည် ။ “ မကျဖူးဘူး..ကိုကျော်စိန်ဘ…..” လို့ ပါးစပ်က တိုးတိုး ပြန်ဖြေသည် ။
“ ရည်းစားကော ရှိခဲ့ဘူးလား…..” “ ဟုတ်….ရှိခဲ့ဘူးတယ်…..” ကျော်စိန်ဘရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ရည်းစားနဲ့တော့ အတွေ့အကြုံများခဲ့မှာပါ..ဒါကြောင့်လည်း ငါနဲ့ အိပ်ဖို့ ကို သူ ပါးစပ်က ပြောထွက်ရဲတာပေါ့..အတွေ့အကြုံကတော့ ကောင်းကောင်း ရှိပုံပေါက်တယ်…လို့ တွေးနေသည် ။ “ ကိုကျော်စိန်ဘကော..အိမ်ထောင် ကျခဲ့ဘူးလားဟင်….” “ မကျဖူးဘူး..မဆွေ…” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်တို့ နေတဲ့ နေရာကို ရောက်သွားပြီ ။ သူတို့ အိမ်လေးက လမ်း အဆုံးက မီးရထား သံလမ်း နားက အုတ်တံတိုင်းနဲ့ ကပ်ရက်က အစွန်ဆုံး အိမ်လေး ဖြစ်သည် ။ အိမ်လေးဆီကို ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က အရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ပြီး လျောက်သွားနေတဲ့ အချိန် ကျော်စိန်ဘသည် လမ်း ဓါတ်မီးတိုင်ရဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ နောက်ပိုင်း ကောက်ကြောင်းကို စူးစိုက်ကြည့်ပြီး လိုက်သွားနေသည် ။
သူ ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းတွေ သုံးနှုံးခဲ့တဲ့ စကားတခုကို ဖျတ်ကနဲ သတိရလိုက်မိသည် ။ “ တင်ကြုံစီးသည် ” ဆိုတာ…။ အခုလည်း ကျော်စိန်ဘသည် တင်ကြုံစီးပြီး လိုက်နေသည် ။ အိမ်တံခါးကို သော့ဖွင့်နေတာ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ လက်တွေ တုန်နေလို့ တော်တော်နဲ့ သော့ပေါက်ထဲ သော့တန် မရောက်နိုင်တာနဲ့ ကျော်စိန်ဘက ကူညီလိုက်ရသည် ။ အင်း…စော်ကြီး စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေပြီ ။ သူလည်း ဒီလိုပါဘဲ ။ ဗျင်းရတော့မယ် ဆိုတာက သေချာနေပြီ ဆိုတော့ သူ့ငပဲက တအားကို ထကြွနေသည် ။ အိမ်လေးထဲမှာ မှောင်မဲနေသည် ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က မီးခလုပ်တွေကို တခြောက်ခြောက်နဲ့ လိုက်နှိပ်ဖွင့်လိုက်လို့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဧည့်ခန်းလေးကို တွေ့လိုက်ရသည် ။
“ ကိုကျော်စိန်ဘ..ထိုင်အုံးနော်..ခဏ…..“ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်သည် တင်ပါးကြီးတွေ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ အတွင်းခန်းထဲကို ဝင်သွားသည် ။ ကျော်စိန်ဘလည်း နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖါလေးမှာ ထိုင်စောင့်နေလိုက်သည် ။အိပ်ဖို့နေရာကို သွား ခင်းကျင်း ပြင်ဆင်နေတာ ဖြစ်မည် လို့ စိတ်ထဲမှာ တွေးလိုက်သည် ။ နံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပြက္ခဒိန်တွေကို သူ လိုက်ကြည့်နေရင်း ငွေချေးတာကလည်း တခြားမှာ ဘယ်လိုမှ ချေးလို့ မရနိုင်ဘူးလား…လို့ စဉ်းစားနေမိသည် ။ သူက မိန်းမကြိုက်တဲ့ ဘဲကြီး ဆိုတာ သူ သိနေလို့ ဖြစ်မည် ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ တောင့်တောင့်တင်းတင်းကြီးကို အမြဲဝါးနေရမယ် ဆိုရင် တော်တော် ကောင်းသည် ။
သူသည် ထွေးထွေးရီကို ဝါးလို့ ရနေပေမယ့် ဘေးမှာ လိုက်ပွဲ အသင့်ဆောင်ထားတာက ပို ကောင်းသည် ။ တခါတလေ ပစ္စည်းကောင်း စားရဖို့က မလွယ်ဘူး ။ “ ကိုကျော်စိန်ဘ …လာလို့ ရပြီ….” အတွင်းခန်းထဲက ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် ထွက်လာသည် ။ အိုး …အိမ်နေရင်း ညအိပ်ဝတ် ဂါဝန်ရှည်ကြီးကို လဲလှယ် ဝတ်ဆင်ထားနေပြီ ။ သေချာတာက ဒီ ဂါဝန်အောက်မှာ ဘာ အတွင်းခံမှ ခံဝတ်မထားဘူး ။ ဟူး…..ဆူဖြိုးတဲ့ ရင်သားစိုင် ထွားထွားကြီးတွေက လှုပ်တုပ်တုပ်နဲ့ …။ သူ့အနောက်က လိုက်သွားသည် ။ အိပ်ခန်း နှစ်ခန်း အနက် ဘယ်ဖက်က အခန်းထဲကို ခေါ်သွားသည် ။ ညအိပ် မီးလုံး ဝါကျင်ကျင်လေးဘဲ ထွန်းထားတဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာ တယောက်အိပ် ကုတင်လေး တလုံး ရှိနေသည် ။
မှောင်နေလို့များ ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းနေသလား မသိဘူး ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က သူ့ကို ကုတင်ဆီကို ခေါ်သွားသည် ။ကျော်စိန်ဘရဲ့ ဒုတ်က အဆင်သင့် မာကြော ထောင်မတ်နေပြီ ။ “ ဆွေ…ဆွေ့ကို ဘာလုပ်စေချင်လဲဟင်…..” ကုတင်ဘေးနားမှာ နီးနီးကပ်ကပ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်မိကြတဲ့ အချိန် ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က တုန်ရီတဲ့ အသံလေးနဲ့ မေးလိုက်တဲ့အခါ ကျော်စိန်ဘလည်း “ ဆွေ့ရဲ့ အဝတ်တွေကို အကုန် ချွတ်လိုက်..” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ သူ့ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေကိုလည်း အမြန် ချွတ်လိုက်သည် ။ ညဝတ် ဂါဝန်ရှည်လေးကို တထပ်ထဲ ဝတ်ထားတာမို့ ချွတ်ပစ်တာက မကြာပါဘူး ။ တခဏ အတွင်းမှာဘဲ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်သည် ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားသည် ။
ကျော်စိန်ဘလည်း အဝတ်တွေကို အကုန် ချွတ်ပစ်လိုက်တာမို့ ကိုယ်လုံးတီးကြီး ဒုတ်ကြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ ဖြစ်နေပြီ ။ သူ့ဒုတ်ကြီးသည် လုံးပတ် တုတ်လွန်းသလို ရှည်လွန်းတာကြောင့် ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း ဒါကြီးကို ကြောက်လန့်သလို ပါးစပ်လေး အဟောင်းသားနဲ့ ငေးကြည့်နေသည် ။ “ ကဲ…ဆွေ ကုတင်ပေါ်ကို တက်..လုပ်ကြရအောင်…..” ပေါင်လုံး ဖြူတုတ်တုတ် ဖင်ကြီးကြီးနဲ့ ရေဆေးငါးကြီးကို ကြည့်ပြီး ကျော်စိန်ဘ စိတ်တွေ ထိန်းလို့ မရတော့ ။ ဒုတ်ကလည်း ဘာနာသလဲ မမေးနဲ့ ။ ချက်ကို ကပ်နေပြီ ။ သူ့လက်နှစ်ဖက်က တင်းလုံးနေတဲ့ ရင်စိုင်ကြီး နှစ်မွာပေါ်ကို ရောက်သွားကြသည် ။ပွတ်သက်သလို ဆုပ်နယ်နေသည် ။ ရင်သီးလေးတွေက စူထွက်နေကြသလို မာတင်းနေသည် ။
ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ ကာမစိတ်တွေကြောင့် လိင်တန်ရဲ့ ထိပ်ပေါက်လေးထဲက အရည်ကြည်လေးတွေ ယိုစီး ကျနေကြပြီ ။ “ ဆွေ….ကိုယ်ံဟာကို စုတ်ပေးမလား…..” ကျော်စိန်ဘက သူ့ဒုတ်ကြီးကို ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ လက်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်သည် ။ “ ဟို..ဟိုလေ……ဆွေ…ဆွေ….ဆွေ…မစုတ်ဖူးဘူး…..” “ ဆွေ မစုတ်တတ်ရင် ကိုယ် သင်ပေးမှာပေါ့…..” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ကျော်စိန်ဘရဲ့ လီးကြီး အဆန့်မပြဲ ရောက်နေပြီ ။ိ“ စုတ်..စုတ်….မဆွေ..လျာနဲ့ ဝိုက်ပြီး ကလိပေး….” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း သူ့လီးကို လျာနဲ့ ဝိုက်ကစားပြီး စုတ်ပေးနေတဲ့အချိန် တင်းလုံးပြီး ခပ်တွဲတွဲကျနေတဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ နို့ကြီးတွေကို သူကိုင်နယ် ကစားနေသည် ။
စူထွက်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းညိုညိုလေးတွေကို လက်ညှိုးနဲ့ လက်မ သုံးပြီး ချေပေးနေသည် ။ ဒီစော်ကြီးသည် သူ့ကို အထာပေးနေတာတော့ ကြာပြီ ။ ဒီလောက် မြန်မြန်နဲ့ ဒီအခြေအနေကို ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျော်စိန်ဘ မထင်ခဲ့ဘူး ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို သူ ကော့ကော့ထိုးသွင်းနေရင်း နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အားရပါးရ ဆုပ်နယ်နေသည် ။ “ ဟူး…ကောင်းလိုက်တာ..စုတ်..စုတ်..ဒါ ပြီးရင် ခင်ဗျား စောက်ပတ်ကို ကျုပ် ယက်ပေးမယ်…..” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်သည် လိင်ဆက်ဆံဘူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ပေမယ့် လိင်တန်ကို စုတ်တဲ့ အတွေ့အကြုံ မရှိ ခဲ့ဘူး ဆိုတာ ကျော်စိန်ဘ သိလိုက်သည် ။ သူက ဘယ်လို စုတ်ရမည် ဆိုတာကို သင်ပြတာတောင် သူမသည် ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ ။
ဒါကြောင့် သူမကို စုတ်နေတာကို ရပ်ခိုင်းလိုက်သည် ။ ပြီးတော့ သူမကို ဖင်ပူးတောင်း ထောင် ကုန်းခိုင်းလိုက်သည် ။ ဖင်တုံးကြီးသူ ဖြစ်တာကြောင့် ဖင်ပူးတောင်း ထောင်လိုက်တဲ့အခါ ဖင်ကားကားကြီးတွေက ပိုကြီးသလို ထင်မှတ်ရပြီး ဖင်ကြီးတွေ ကြားက စောက်ဖုတ်ကြီးက ပြူးထွက်နေသည် ။ ကျော်စိန်ဘလည်း ပက်လက် ပေါင်ကားခိုင်းပြီး ယက်ရတာထက် အခုလို ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ထားတဲ့အချိန် ပြူး ထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ယက်ရတာက ပိုကောင်းသည် လို့ ထင်ပြီး အခုလို ဖင်ပူးတောင်းထောင်တဲ့ ပုံစံကို လုပ်ခိုင်းလိုက်တာပါ ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း သူလုပ်ခိုင်းတဲ့ ပုံစံကို ချက်ချင်း လုပ်ပေးလို့ ကျော်စိန်ဘသည် ဒီမိန်းမ မဆိုးဘူး လို့ မှတ်ချက်ချသည် ။
ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီကို မယက်ခင် အရင် နမ်းရှုံ့လိုက်သည် ။ “ ဟင့်…ဘာလုပ်တာလဲကွယ်…..မနံဘူးလား….အားနာလိုက်တာ…..” “ ဟင်း..အဲဒီအနံ့ကို ကျုပ် ကြိုက်တာ….ဒီအနံ့က ကျုပ်ရဲ့ လိင်စိတ်ထကြွတာကို အမြင့်ဆုံးကို ရောက်သွားစေတယ်…” ပြောပြောဆိုဆို ကျော်စိန်ဘက ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ ခုံးဖေါင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို လျာနဲ့ ယက်လိုက်သည်။ အောက်ကနေ အပေါ်ကို ပင့်ကော် ယက်လိုက်တာပါ ။ “ အိုး…….ဟင့်…..အမလေး………” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း ဖင်တုံးကြီးတွေ ရမ်းခါသွားရအောင် တုန်လှုပ်သွားသည် ။
ကျော်စိန်ဘလည်း ဖင်ပူးတောင်းထောင်ပေးထားတဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ အနောက်ဖက်မှာ လေးဖက်ထောက်ရက် နဲ့ သူမ စောက်ဖုတ်အကွဲကြီးကို လျာနဲ့ ယက်နေတာမို့ ခွေးတွေ တကောင်နဲ့ တကောင် ဖင်ကို လျာနဲ့ ယက်နေ သလို ပုံစံ ဖြစ်နေသည် လို့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က ထင်မိလိုက်သည် ။ ကျော်စိန်ဘလည်း လျာနဲ့ ဆက်တိုက် ဖိဖိယက်ပေးလိုက်ရင်း စိတ်တအား ကြွလာတော့ စောက်ဖုတ်ကို ပြွတ်ကနဲ စုတ်ယူလိုက်သည် ။ “ ဟား…..” “ အိုး……” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း သူမ ဘဝမှာ ပထမဆုံး စောက်ဖုတ် အယက်ခံဘူးတာမို့ အတွေ့အကြုံသစ်ကို ထူး ဆန်း သဘောကျနေသည် ။
ငွေအများကြီးကို အပူတပြင်းလိုလို့ အကူအညီပေးတဲ့ ကျော်စိန်ဘကို သူ့လိုဘတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ရပေမယ့် တကယ်တမ်း သူမကိုယ်တိုင်လည်း ယောက်ျားရဲ့ အထိအတွေ့တွေကို ငတ်မွတ် ငံ့လင့်နေခဲ့တာ မဟုတ်လား ။ ရေငတ်တုံး ရေတွင်းထဲကျလိုက်သလို လိုချင်တာတွေကို ကျော်စိန်ဘက ပေးစွမ်းနေပြီ ။ သူ့လျာကြီးက အပြားလိုက်ကြီး အကွဲကြောင်းတလျောက် အပေါ်က အောက် အောက်က အပေါ် တပြတ်ပြတ်နဲ့ ယက်ပေးနေသလို လျာထိပ်ချွန်နဲ့လည်း စောက်ဖုတ် အတွင်းထဲကို ထိုးပေးလာသည် ။ “ အိုး…အား…..အား……အား……….” ဖင်ကြီးတွေ တကြွကြွနဲ့ တအား အရသာထူးကဲနေတဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ကို ဒီလောက် နှူးနှပ်ပေးရင် တော်ပြီ လို့ ကျော်စိန်ဘ ယူဆသည် ။
သူမသည် ဖင်တကြွကြွနဲ့ စောက်ဖုတ် တအား ယားကြွနေပြီ ။ “ ကျုပ် ယက်တာတွေ ကြိုက်လား…မဆွေ…..” “ ကြိုက်….ကြိုက်တယ်..ကိုကျော်စိန်ဘ……” “ အင်း..ကြိုက်ရမယ်လေ..ကျုပ်က စေတနာ ပါတယ်ဗျ……ခင်ဗျားကို ကောင်းစေချင်တယ်..သိလား…” “ အင်း..ဟုတ်ကဲ့ပါ…..” “ ကဲ..ကျုပ်တို့ လိုးကြရအောင်ဗျာ……” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ကို ကုတင်ပေါ်မှာ ကိုယ်တဝက် ပက်လက် အိပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး ကျော်စိန်ဘက ကုတင်ဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်း သူမ ပေါင်တန်တွေကို ဖြဲကားစေသည် ။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပူးကာ မြှောက်ကိုင်လိုက်တော့ ပေါင်ကြားက အင်္ဂါစပ်ကြီးက ဖေါင်းပြူး အစ်ထွက်နေသည် ။
ကျော်စိန်ဘလည်း ဒီမြင်ကွင်းကို စွဲမက်စွာနဲ့ ပြုံးပြုံးကြီး စိုက်ကြည့်နေလို့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း “ အို..လုပ်မှာဖြင့် လုပ်လေ..ဘာလို့ သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်နေတာလဲကွာ….” လို့ လေသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်ရင်း သူမ မျက်လုံးတွေကို ပိတ်ထားလိုက်သည် ။ “ ခင်ဗျားရဲ့ အဖုတ်ကြီးက ကြည့်ကောင်းလွန်းလို့ပါဗျာ…” လို့ ကျော်စိန်ဘက ပြောလိုက်သည် ။ “ ဒီလိုဘဲ ကြည့်နေတော့မှာလား “ လို့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က ပြောပြန်တော့ ကျော်စိန်ဘလည်း “ လိုးပါပြီဗျာ..လိုးပါပြီ….” လို့ ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ ပြောလိုက်ရင်း သူ့လိင်တန်ကြီးကို လက်တဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ အကွဲကြောင်းကြီးကို အောက်က အထက် အထက်က အောက် လိုင်းဆွဲ ပွတ်တိုက်လိုက်သည် ။
လိင်တန်ထိပ် ဒစ်လုံးကြီးက ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ အစိလေးကို ထိပွတ်သွားတာမို့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း ဆတ်ကနဲ တုန်သွားရသည် ။ သူ့လက်တဖက်က ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ နို့ကြီးတလုံးကို လှမ်း ကိုင်လိုက်သည် ။ မာတင်း စူထွက်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန် လိင်တန်ကို အင်္ဂါစပ်အပေါက်ထဲကို ဖိသွင်းလိုက်သည် ။ လုံးပတ်တုတ်လှတဲ့ သူ့လိင်ချောင်းကြီး အတင်းကြီး တိုးဝင်လာတာက ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင့်ကို အထူး အရသာ တွေ့သွားစေသည် ။
အင်္ဂါစပ် အတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်သွားတာ ဆိုတော့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် တအားကို တုန်ခါသွားရသည် ။ “ အို…….အမလေး….ကြီးလိုက်တဲ့ ဟာကြီး . .” ကျော်စိန်ဘက သူ့ပစ္စည်းကို ကြီးတယ် ပြောလို့ သဘောကျသွားသည် ။ တင်းကြပ်နေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ပေါက်ထဲကို ဆက်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တော့ လိင်တန်တုတ်ကြီးဟာ တထစ်ထစ်နဲ့ ဗျစ်ကနဲ ထပ် ဝင်သွားသည် ။ ကျော်စိန်ဘအတွက်လည်း တအားကြပ်လွန်းနေသည် ။ နောက်ကို ပြန်ဆုတ်ပြီး ဖိသွင်းတာတွေကို သုံးလေးကြိမ်လောက် လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူ့တန်ဆာချောင်းသည် အင်္ဂါစပ်ခေါင်း ထဲမှာ လှုပ်ရှားလို့ ရလာသည် ။
ဖိဖိသွင်းတော့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ အော်ညည်းသံတွေလည်း ဆက်တိုက် ထွက်လာသည် ။ ကျော်စိန်ဘအတွက် အရာ ရှိသလို ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် အတွက်လည်း ထူး ကဲတဲ့ ကာမ အရသာထူးကို ရနေသည် ။ လိင် ဆက်ဆံခြင်းဟာ တဖက်ထဲ အတွက် မဟုတ်ဘဲ သူကောင်းကိုယ်ကောင်း ယောက်ျားရော မိန်းမ ပါ ကောင်းကြတဲ့ ကိစ္စ တခု ပါလား ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ ခြေထောက်တွေကို သူ့ပုခုံး တဖက်တချက်ပေါ်မှာ တင်ပြီး အားနဲ့ ဖိဖိ ဆောင့်ထည့်တဲ့အခါ တဖပ်ဖပ် အသံတွေနဲ့ အရည်လိုက်လာလို့ တခါတခါ ဖွတ်ဖွတ်ဖွတ် ဆိုတဲ့ အသံတွေကိုပါ ကြားကြရသည် ။
“ ကောင်းလား..မဆွေ…….ကျုပ် လိုးပေးတာ ကောင်းလား….” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း ကာမအရှိန်တွေ တအား တက်နေပြီ ။ တစွပ်စွပ် လိုးထည့်ပေးနေတဲ့ ကျော်စိန်ဘရဲ့ လိုးချက်တွေကိုရော လုံးပတ်တုတ်တုတ် လီးကြီးကိုရော တအားကြိုက်နေသည်မို့ “ ကောင်း တယ်..တအား ကောင်းတယ်…..” လို့ ဖြေလိုက်သည် ။ ကျော်စိန်ဘကလည်း “ လိုးပြီဗျာ..ကျုပ်လည်း တအားကို ကောင်းတယ်..ခင်ဗျား အဖုတ်က ရေလည် လိုးလို့ အရသာ ရှိတယ်…..” လို့ ပြောရင်း ဆက်တိုက်ဘဲ ဆောင့်ထည့် လိုးလေတော့သည် ။ “ အီး…တအား..တအားဆောင့်..ဆောင့်…ဆောင့်…အူး….အူး…….တအားကောင်းနေပြီ…အို…ဆောင့်ပါ…ဆောင့်ပါ……” ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်တယောက် အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်တော့မှာမို့ သွေးရူးသွေးတန်းတွေ ဖြစ်နေပြီ ဆိုတာကို ကျော်စိန်ဘ သိတာကြောင့် တအား ဆက်တိုက် ဆောင့်ထည့်သည် ။
ထမ်းထားတဲ့ သူမ ပေါင်တွေကို ပြန်ချလိုက်ပြီး အားနဲ့ ဖိဖိဆောင့်တာ ။ ဖပ်ဖပ် ဖပ်ဖပ် အသံတွေ နဲ့ ကျယ်လောင်တဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ရဲ့ အော်ညည်းသံတွေဟာ ကျော်စိန်ဘရဲ့ အသက်ရှူသံ ပ်ြငးပြင်းတွေနဲ့ အတူ ထွက်ပေါ်နေသည် ။ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်သည် အင်္ဂါစပ် ကြွက်သားတွေကို တအားညှစ်လိုက်တာကြောင့် ကျော်စိန်ဘရဲ့ လိင်တန်ကို တအားဆုပ်ညှစ်တဲ့ ကြပ်တည်းတဲ့ ခံစားမှုနဲ့အတူ ကျော်စိန်ဘ တအားကောင်းလွန်းလာလို့ ပြီးခါနီးဆဲဆဲ ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် အရင် ပြီးသွားသည် ။
“ အမလေး..အမလေး…ကောင်းလိုက်တာ…အို…အို…..ကောင်းလိုက်တာ…….အား…….အား…..” လို့ အော်ရင်း ပြီးသွားသည် ..။ ကျော်စိန်ဘလည်း ဆက်တိုက် ဆက်ဆောင့်လိုက်သည် ။ သူလည်း တအားကောင်းတက်သွားပြီး သုတ်တွေ တအားပန်းထွက်သွားပြီး ပြီးသွားသည် ။ “ အား……အား…..အား……..ဟင်း…ဟင်း………..ဟင်း………..အိုး………” “ ကိုကျော်စိန်ဘ…..ရှင့်ဟာကို မထုတ်နဲ့အုံး……” အရေးထဲ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်က သူ့ကို တဆုံး ဆက်သွင်းစိမ်ထားဖို့ ပြောနေပြန်သည် ။ အိမ်ကို ပြန်ရောက်ပြီ ။ ကျော်စိန်ဘ ရေချိုးနေသည် ။ အလုပ်က ခွင့်ယူထားသည် ။
ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်နဲ့ အပြတ်ကဲလိုက်လို့ သူ့တကိုယ်လုံး နုံးချိနေသည် ။ ကာမ ဆန္ဒ ပြင်းထန်လိုလားနေတဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်လည်း တချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ် ဖြစ်သွားလို့ ကျေနပ်နေသည် ။ ငွေလိုတာလည်း ငွေရ..ကာမဆန္ဒလိုတာလည်း ကာမဆန္ဒ ပြည့်ရလို့ပါ ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ထွေးထွေးရီက နွေးထွေးတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ ကြိုနေသည် ။ သူ့ကို ပြာပြာသလဲ ဂရုစိုက်သည်။ သူ ဘယ်သွားသည် ဘာလုပ်သည် ဆိုတာတွေကို မမေး ။ စပ်လည်း မစပ်စု ။ ဟင်းကောင်းတွေ ချက်ထားသည်.. အကိုကြီး စားချင်တဲ့အချိန် ပြောပါတဲ့ ။ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ပြီး ရေပူပူတွေ တေဝါဝေါ ကျနေတဲ့ ရေပန်းအောက်မှာ မျက်စိပိတ် မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေချိုးလိုက် သည် ။
“ အကိုကြီး…..” ဟင်…ထွေးထွေးရီ သူ့ဆီ ရောက်လာတာ ။ ရေချိုးခန်းထဲကို ဝင်လာသည် ။ ထွေးထွေးရီသည် ကိုယ်ပေါ်မှာ အ ဝတ်ဆိုလို့ ချည်တမျှင်တောင် ကပ်မနေ ။ ကိုယ်လုံးတီးကြီးနဲ့ ဝင်လာတာ ။ “ အကိုကြီးကို ချေးတွန်းပေးဖို့ လာတာပါ..” လို့ ထွေးထွေးရီက ပြောလိုက်ရင်း သူ့ကျောပြင်ကို ထွားလုံးတင်းနေ တဲ့ ရင်သားစိုင်ကြီးနှစ်လုံးနဲ့ ဖိကာ ပွတ်ပေးတော့သည် ။ ကျောပြင်ကို ဆပ်ပြာရည်တွေနဲ့ ရင်သားကြီးနှစ်လုံးက ချောမွတ် ပွတ်တိုက်နေသည် ။ထွေးထွေးရီရဲ့ လက်တဖက်ကလည်း သူ့ရင်ဘတ်ကို လာပွတ်နေသည် ။ “ ခံလို့ ကောင်းလားဟင်..အကိုကြီး…..”
“ အင်း….ကောင်းတယ်…” ထွေးထွေးရီက သူ့လက်တဖက်ကို ဆွဲယူကာ သူမပေါင်ကြားထဲကို ပို့ပေးလိုက်သည် ။ သူမ ကိုင်စေချင်တဲ့နေရာကို ပို့ပေးလိုက်တာ ။ သူ့လက်သည် ထွေးထွေးရီရဲ့ မို့ဖေါင်းတဲ့ ဆီးခုံဖေါင်းဖေါင်းကြီးပေါ်ကို ရောက်နေသည် ။ အမွေးပါးပါးနဲ့ ဖေါင်းအိနေတဲ့ ထွေးထွေးရီရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို ကိုင်မိရတော့ သူ့စိတ်ရိုင်းတွေက ထိန်းကနဲ ထကြွလာရတော့တာဘဲ ။ ဘယ်လောက်ဘဲ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်နဲ့ တညလုံး ဆွဲထားထား..ထွေးထွေးရီရဲ့ နို့ကြီးတွေနဲ့ကျောကို ပွတ်နေကထဲက သူ့လိင်တန်သည် တမဟုတ်ချင်း ကြီးလာထွားလာ ရှည်ထွက်လာခဲ့ပြီး အခုလို သူက ထွေးထွေးရီရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကို ကိုင်လိုက်တော့ တအားကို ထကြွ ထောင်မတ်လာသည် ။
“ ဟိ..အကိုကြီး ထလာပြီ …….ဒုံးပျံကြီး ပစ်ဖို့ ရယ်ဒီ ဖြစ်တော့မယ်…..ခိခိ…..” ထွေးထွေးရီက သူ့လိင်တန်ကို ထိပ်ပိုင်းကနေ ကိုင်ဆုပ်လိုက်သည် ။ ဆပ်ပြာရည်တွေနဲ့ ရှေ့နဲ့နောက် ပွတ်တိုက်ပေးသည် ။ “ အူး……အား…အား…….ထွေးထွေးရီ…နင်..တတ်လည်း တတ်နိုင်တယ်ဟာ….ငါ့ မထထအောင် လာဆွနေတယ် . . .” ထွေးထွေးရီက ပြုံးစိစိနဲ့ မတ်မတ်ထောင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျော်စိန်ဘရဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီးကို ကွင်းတိုက် ကစားပေးနေရာက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ချလိုက်ပြီး ထိပ်ဖူးကားကြီးကို ငုံကာ စုတ်လိုက်လေသည် ။
“ ဟေး…အိုး……..နင်…နင်….လုပ်လည်း လုပ်တတ်တယ်…” ထွေးထွေးရီသည် လိင်တန်ကြီးကို အားရပါးရ စုတ်နေပြီ ။ ထွေးထွေးရီရဲ့ အစုတ်သည် ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ထက် ပို သာတာက အမှန်ဘဲ ။ သူ့လိင်တန်ကြီး အစွမ်းကုန် တင်းမာပြီး ထွေးထွေးရီရဲ့ အစုတ်အယက် ကလိချက်တွေကြောင့် တအားထန်တင်းနေပြီ ။ ထွေးထွေးရီကို နံရံမှာ လက်နှစ်ဖက် ထောက်ပြီး ဖင်ကုန်းခိုင်းလိုက်သည် ။ ခြေထောက်တွေကို ကားခိုင်းလိုက်သည် ။ ဖင်တုံးတွေ ကြားက ပေါ်လာတဲ့ စောက်ဖုတ်အမြောင်းထဲကို လိင်တန်တေ့ပြီး ဖိသွင်းလိုက်သည် ။ “ အား……” ထွေးထွေးရီရဲ့ အော်သံလေး ထွက်လာသည် ။ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို လှမ်းဆွဲပြီး ဖိဖိထိုးညှောင့်ပစ်လိုက်သည် ။
“ အား…..အား….အား…..” “ ဖပ်..ဖပ်…ဖပ်..ဖပ်……..” ထွေးထွေးရီက ကုတင်ပေါ် ရွေ့ကြရအောင် အကိုကြီး…လို့ ပြောသည် ။ ကုတင်ပေါ် ရောက်တော့ “ ကျမ အပေါ်က တက်ပါရစေ ” လို့ ပြောတာကြောင့် ပက်လက်အိပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ထွေးထွေးရီလည်း ပေါ့ပါးစွာနဲ့သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ခွတက်လာသည် ။ မာကျောတင်းထောင်နေတဲ့ သူ့လိင်တန်အပေါ်ကို ခွထိုင်လိုက်ပြီး လက်ကလေးနဲ့ လိင်တန်ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး သူမ စောက်ဖုတ်မှာ တေ့လိုက်တဲ့ ထွေးထွေးရီသည် ကာမစိတ်တွေ တော်တော် ပြင်းထန်နေပုံရသည် ။ နှာတန်အဖျားနဲ့ ပါးပြင် နားရွက်တွေ နီရဲနေသည် ။
လိင်တန်ပေါ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိထိုင်ချလိုက်တဲ့အချိန် တဟင်းဟင်းနဲ့ ညည်းလိုက်တဲ့အသံတွေ ထွက်လာသည် ။ “ အိုး..ကျွတ်..ကျွတ်…..” ထွေးထွေးရီသည် သူမ စိတ်ကြိုက် ဖိဖိညှောင့်တော့တာဘဲ ။ ကျော်စိန်ဘလည်း အောက်ကနေ ပင့်ကော့ ထိုးပေးသည် ။ ဆောင့်အချနဲ့ ပင့်အထိုး စည်းချက်ညီနေသည် ။ တစွပ်စွပ် တဖပ်ဖပ် အသံတွေ ထွက်နေသည် ။“ အား……အား…ကောင်းလိုက်တာ…အကိုကြီးရယ်…..” သူ အားမရတာကြောင့် ထွေးထွေးရီကို ပက်လက်ပေါင်ဖြဲခိုင်းလိုက်ပြီး အားနဲ့မာန်နဲ့ တက် ဆောင့်တော့မှ တအား ကောင်းသွားပြီး သူရော ထွေးထွေးရီကော ပြိုင်တူလို ပြီးသွားကြရသည် ။ ပက်လက်လှန်ပြီး အမောဖြေနေခိုက် ထွေးထွေးရီဆီက ထူးဆန်းတဲ့ စကားတွေကို သူ ကြားလိုက်ရသည် ။
“ အကိုကြီး…..အကိုကြီးနဲ့ ကွဲသွားခဲ့တဲ့ ခင်နှင်းဆီကို အကိုကြီး လိုက်ရှာသေးလားဟင်…..” တဲ့…။ ကျော်စိန်ဘလည်း ထွေးထွေးရီ ကို ဆတ်ကနဲ လှည့်ကြည့်လိုက်သည် ။ “ ရှာတာပေါ့….ဘယ်ကို ရောက်သွားသလဲ မသိတော့ဘူး…..” “ အကိုကြီးရဲ့ ရင်သွေးလေး တနေရာရာမှာ ရှိနေမှာဘဲနော်…” “ အင်း…..” “ အကိုကြီး…ပြန်တွေ့ချင်လားဟင်……” “ ထွေးထွေးရီ..နင်..ဘာတွေ လာမေးနေတာလဲ…..ငါ့စိတ်တွေကို ကြေကွဲထိခိုက်အောင် လာလုပ်မနေနဲ့…..ငါ တွေ့ချင်တာပေါ့..ခင်နှင်းဆီကို ငါ တကယ် ချစ်ခဲ့ကြိုက်ခဲ့တာ….” “ အော်..အကိုကြီးရယ်…ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ…ဒါနဲ့များ ..သူ့ကို ထားပြီး နိုင်ငံခြားကို ထွက်သွားရတယ်လို့…”
“ အေး..အဲ့တုံးက ငါက ကလေးမယူချင်ဘူးဟ…ငါက တကယ်ဆို ပျော်လို့ အားမရသေးတာ..ငါ မှားပါတယ်… ငါ့ရဲ့ မိုက်မဲချက်တွေပေါ့ဟာ…” ထွေးထွေးရီလည်း မထင်တာတွေ ကြားရလို့ အံ့သြနေသည် ။“ ဒါဆို ခင်နှင်းဆီကို ပြန်တွေ့ရင် အကိုကြီး လက်ခံမှာလား….” “ အင်း..လက်ခံမှာပေါ့…” “ ဟင်..ဒါဆို..ထွေးထွေးရီကို ဘယ်လို လုပ်မလဲဟင်….အကိုကြီးက ထွေးရီကို ကန်ထုတ်လိုက်တော့မှာလား..” ထွေးထွေးရီက ပြုံးစိစိနဲ့ မေးလိုက်တာပါ ။ ကျော်စိန်ဘက ထွေးထွေးရီရဲ့ ဖင်ကားကားကြီးကို သူ့လက်ဖဝါးကြီးနဲ့ ဖျန်းကနဲ ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်း ။
“ နင့်ကို ငါ ဘယ်ကန်ထုတ်မလဲ..နင့်ကို ငါ အရံထားမှာပေါ့….ခင်နှင်းဆီကို လိုးလိုက်..နင့်ကို လိုးလိုက်..တခါတလေ နှစ်ယောက်စလုံးကို တချိန်ထဲမှာ လိုးလိုက်နဲ့…ဟားဟားဟား……” လို့ ပြောရင်း ရယ်မောလိုက်တဲ့အခါ ထွေးထွေးရီလည်း..“ ဟာ…အကိုကြီး..တအားဆိုးတာဘဲကွာ….” လို့ ပြောရင်း ကျော်စိန်ဘရဲ့ ချွေးတွေ စိုနေတဲ့ ကျောပြင်ကြီးကို လှမ်း ရိုက်လိုက်သည် ။ “ ဟားဟားဟား….” ဒီနေ့ ရုံးကို ရောက်တော့ ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင် တယောက် ဘယ်လိုနေသလဲ ဆိုတာ ကျော်စိန်ဘ သိချင်သည် ။ မနေ့က ဘဏ်ကနေ သူမ လိုတဲ့ ငွေတွေကို ကိုယ်တိုင် လိုက်ထုတ်ပေးလိုက်သည် ။
ငွေက တော်တော် များပေမယ့် ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်ကြီးကို အပေါက်စုံအောင် လိုးခွင့်ရတာကိုလည်း ကျော်စိန်ဘ အင်မတန် ကျေနပ်နေသည် ။ ဆက်ဆက် ပြန်ဆပ်ပါမယ် လို့ အတန်တန် အထပ်ထပ် ဂတိပေးနေတဲ့ သူမကိုလည်း ယုံမိသည် ။ အတိုး တပြားမှ သူ မယူလိုဘူး ။ သူမက သူလိုတဲ့အချိန် သူ့လီးကို အားရပါးရ စုတ်ပေးတာတွေနဲ့ ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ပေးပြီး စိတ်ကြိုက် လုပ်ချင်သလို လုပ်ပါတော့ လို့ စောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ စအိုပေါက်ကို သူ့ကို ထိုအပ်တာတွေနဲ့တင် သူ ကျေနပ်နေပါပြီ…… ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged လိုတဲ့အခြိနျစိတျကွိုကျ